одна из самых популярных в мире, так как представители данной сферы деятельности получают довольно-таки высокие заработные платы. व्यवसाय अभिनेता - सबैभन्दा संसारमा लोकप्रिय को एक, गतिविधिको यो क्षेत्र को प्रतिनिधिको रूपमा एकदम उच्च ज्याला छन्। धेरै बच्चाहरु र युवा मान्छे भविष्यमा अभिनेता बन्न चाहन्छु, तर कसरी आफ्नो चुनिएको क्षेत्रमा कडा काम गर्न कुनै विचार छ। अभिनेता राति गोली कारण हुन सक्छ, र जहाँ प्रक्रिया बिहान सबेरै सुरु र अर्को दिन को साँझ समाप्त परिस्थिति हो। तपाईं भविष्यवाणी गर्न सक्दैन केही छ, त्यसैले तपाईं के जाने थाहा हुनुपर्छ। आज हामी विस्तार मा एक राम्रो चिरपरिचित अभिनेता, लेखक, निर्देशक कुरा, र सोही समयमा, अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका देखि निर्माता हुनेछ।
बिल Lourens - सबै दुनिया जो आफ्नो क्यारियर समयमा मात्र धेरै चलचित्रमा प्ले छ एक मानिस भन्दा जानिन्छ, तर एक निर्देशक, लेखक वा निर्माता रूपमा धेरै बढी छायांकन कार्यहरूमा भाग छ। हामी यो मानिसको जीवनी कुरा यस लेखमा हामी आफ्नो Filmography सिक्न, साथै थप छलफल। गरेको अब सुरु गरौं!
एकदम लोकप्रिय आज लेखक र निर्माता कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म भएको थियो डिसेम्बर 26, 1968। मानिस विलियम र मरियम को कलेज स्नातक र त्यसपछि यस्ता "मित्र," "नानी" र अरूलाई रूपमा टेलिभिजन श्रृंखला लागि स्क्रिप्ट को एक जोडी लेखे। साथै, आफ्नो क्यारियर को शुरुवात मा, जवान निर्माता को एनिमेटेड श्रृंखला, भनिन्छ जो क्लोन उच्च सिर्जना गरियो।
यो पनि 2009 देखि 2015 को लागि अवधि मा, सह-लेखक लरेन्स कुरा, निर्देशित र कार्यकारी एकदम क्षण, "Cougar टाउन" टेलिभिजन श्रृंखला मा चिरपरिचित उत्पादन लेखेका टिप्पण लायक छ।
बिल Lourens जसको व्यक्तिगत जीवन, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री गर्न विवाह, राम्रो नीरस छ Christa मिलर। क्षणमा, जोडी सँगै तीन छोराछोरी छ: छोरा विलियम (03.01.2003) र हेनरी (08.10.2006), क्रमशः, साथै चार्लोट छोरी, जुलाई 8, 2000 जन्म।
त्यसैले तपाईंले यो विशिष्ट विशेषज्ञहरु बारेमा, जसको पेसा धेरै तेजी विकास एक सानो बिट बिल लरेन्स, सिकेका छौं। र अब आफ्नो Filmography बारेमा विस्तृत मा थप कुरा गरौं।
यसलाई जवान र अझै पनि एकदम अनुभवहीन डाक्टर को काम बारेमा बताएको एक छायांकन लोकप्रिय अमेरिकी टेलिभिजन श्रृंखला छ। को फिलिमहरु को प्रीमियर 2001 मा भयो, र उनको शो9वर्ष मा पूरा भएको थियो। क्षणमा, परियोजना9मौसम छ, र एपिसोडको कुल संख्या 182 टुक्रा छ। पहिलो सात मौसम टेलिभिजन च्यानल एनबीसी देखाइएको थियो, तर अन्य दुई संस्थापक शुरू टिभीमा "अरे बीबीसी।"
को छायांकन कार्य को घटनाहरू हामीलाई यूहन्ना डोराएन र Kristofer Terk नामको बरु अनुभवहीन डाक्टर को जीवन मा के भइ रहेको छ बारेमा बताउनुहोस्। प्रशिक्षण स्नातक गरेका बारेमा जवान मान्छे, त्यसैले मात्र स्थानीय अस्पताल जसको नाम निम्नानुसार मा रूसी अनुवाद गरिएको छ, काम गर्न आए: "। Sacred हृदय"
अस्पतालमा, फिलिम को मुख्य वर्ण मित्र को एक विशाल संख्या हो, तर अफ्ठ्यारो बारे भूल छैन, मात्र व्यक्तिगत तर पनि पेशेवर। यस मामला मा, यो सामाग्री मा प्रस्तुत छ फोटो जो जो बीच बिल Lourens छन् श्रृंखला को निर्माताहरू,, प्रेम लाइनहरु, बारे मा भूल छैन जो यो परियोजना तीन मा।
सामान्य मा, फिलिम को घटना एकदम तीव्र गतिमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो परियोजना को सम्पूर्ण बिन्दु मान्छे आफ्नै आँखाले उठाउनु र डाक्टर र एक अनुभवहीन विद्यार्थीको कसरी कठिन एक राजधानी पत्र संग एक पेशेवर बन्न जो हेर्न अनुमति छ भनेर टिप्पण लायक छ।
यो छायांकन मात्र 2016 मा देखियो। मिति, फिलिम को रील मात्र एक मौसम प्रतिनिधित्व छ। बिल Lourens, जसको फिलिमहरु हामी यो सामाग्री मा छलफल, यो मामला मा निर्माता को भूमिका, साथै लिपि लेखन भाग लिन प्ले। दुनिया मा फिलिमहरु को प्रीमियर भयो मार्च 31, 2016, र प्रत्येक एपिसोड को अवधि लगभग 43 मिनेट छ। यो श्रृंखला 13 एपिसोड छ।
यो छायांकन काम बारे समीक्षा लगभग सधैं सकारात्मक छ। सरल, तर रोचक षड्यन्त्र र भइरहेको छ के को गतिशीलता जस्तै मान्छे। र अब हामीले यो श्रृंखला मा बारेमा कुरा गर्दै छन् के बारेमा थप पत्ता।
टिभी श्रृंखला Billi Lourensa हामीलाई धेरै जिम्मेवार छ जो हङकङ, देखि एक गुप्तचर बारेमा र एकै समयमा लगनशील व्यक्ति मा बताउँछ। एक दिन एक मानिस यसलाई लस एन्जलस उड गर्न छानबिन गर्न आवश्यक छ जो मामला, मार्फत आउँछ।
यस श्रृंखला को मुख्य नायक शहर उड गर्न जा रहेको छ, तर पनि यो कुरा पनि वास्तविक slobs छ जो एक प्रहरी अधिकारी संलग्न छ भन्ने महसुस छैन। गरेको यो जवानहरू अपराध को अपराधियों पक्रने परिणाम प्रत्येक अन्य सहयोग गर्न को लागि कसरी कठिन वा सजिलो हुनेछ हेरौं।
आज हामी बिल लरेन्स को जीवनी छलफल र आफ्नो Filmography बारेमा एक सानो कुरा। सबै चलचित्रहरू सकारात्मक प्रतिक्रिया छ, त्यसैले तिनीहरू निश्चित ध्यान गर्न आवश्यक छ। राम्रो दृश्य र सबै भन्दा राम्रो!
को मुखशोथ वयस्क मा उपचार?
Fetisov Gleb Gennadevich। जीवनी। उपलब्धिहरू उद्यमी
के यदि मानिस आफ्नो नङ बाइट्स?
बाल Straightener फिलिप्स HP8344